E-Journal: July 2010
မိန်းကလေး တစ်ယောက်အဖို့ ချစ်သည်ဟု သူစိမ်းယောက်ျားလေး
တစ်ယောက်ကို အဖြေပေးရသည်မှာ စွန့် စားမှုတစ်ခုပင်ဖြစ်လေသည်
ဤမြို့ သူမဟုတ်။ သို့ သော် အလုပ်လုပ်နေသူတစ်ယောက်။ သူမမှာညီမတစ်ယောက်
ရှိသည်။ အတူနေ၏။ သူမ၏ အလုပ်သည် တစ်ပတ်မှာ နှစ်ရက်နားရ၏။ သူမဖြတ်လျောက်
နေကြ သဲခင်းလမ်းလေးသည် သူမ ကိုသိ၏။ ဤမြို့ ရဲ့လေးညင်းလေးများသည် သူမကို
ကြည်နူးစေ၏။ ကုက္ကိုပင်အိုကြီးသည် သူမကို မြင်လျင် အမြဲတမ်း ခေါင်းငြိမ့် လျက်
တနေ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်သည် ကုက္ကိုပင်အိုကြီး၏ ရင်ခွင်ထဲထိုင်၍ သူမကိုစိုက်
ကြည့်နေခဲ့၏။ ထိုနေ့ က သူမ တီရှပ်အဖြူတစ်ထည်ကိုဝတ်လာခဲသည့်နေ့ ။
ကောင်လေးသည် တွေတွေလေး သူမကိုစိုက်ကြည့်နေ၏။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်
အဖို့ သူစိမ်းယောက်ျားလေး၏ တွေတွေလေး အကြည့်သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသယ
ဝင်စေတတ်၏။ ခြေလှမ်းမှားတတ်၏။ ကျေနပ်သည့်အပြုံးနှင့် ခေါင်းလေးကိုပိုပြီးငုံ့ သွား
တတ်၏။ မကျေနပ်သည့်မျက်စောင်းနှင့် ကောင်လေးကို အသိအမှတ်ပြုတတ်၏။
တနေ့ ထိုကောင်လေးသည် သဲခင်းလမ်းတစ်လျောက် သူမ၏နောက်နဘေး ခပ်ခွာခွာ
လေး ကပ်လိုက်လာခဲ့လေသည်။ ထို့ နေ့ က သူမ အနက်ရောင်အစင်းကြောင်းပါသည့် တီရှပ်
ကိုဝတ်လာခဲ့သည့်နေ့ ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖို့သူစိမ်းယောက်ျားလေး၏
နောက်ယောင်ခံလိုက်ခြင်းသည် ခြေလှမ်းကို နှေးစေ၏၊ မြန်စေ၏။ ကိုယ်ယောင်
ဖျောက်တတ်၏။ ကျေနပ်သည့်မျက်စောင်းနှင့် ရန်လုပ်တတ်၏။
တနေ့ ထိုကောင်လေးသည် သူမကို လှသည်ဟု ပြောလာ၏။ ထိုနေ့ က သူမ
ပန်းအနီရောင် အနွေးထည်လက်ရှည်ကိုဝတ်လာခဲ့သည့်နေ့ ။ကောင်လေးကပြော၏။
“သိပ်လှတာပဲ” တဲ့ …မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖို့ထိုစကားလုံးသည် စိတ်ကိုရွှင်စေ
၏။ ပြောသူကိုတိတ်တခိုးကျေးဇူးတင်၏။ ရှက်ပြုံးလေးနှင့် ငြင်းဆိုတတ်၏။
တနေ့ ဟူသည့်နေ့ ပေါင်းများစွာသည် ကောင်လေးနှင့်ကောင်မလေးကို ပိုပြီးရင်းနှီး
သွားစေခဲ့သည်။ နွေ၊မိုး၊ဆောင်း တွင်သည့် ဥတုသုံးဦးသည် သူတို့ နှစ်ဦး၏ ခင်မင်ရင်း
နှီးမှုကို အသိမှတ်ပြုခဲ့ပြီ။ သူမကို တွေ့ တိုင်း ကောင်လေးသည် ရယ်စရာတွေပြော
တတ်၏။ အလိုက်သိ၏။ ဂရုစိုက်၏။ ကြင်နာ၏။နွေးထွေးမှုပေး၏။ ယုယတတ်၏။
ထို့ ကြောင့် သူမသည် ကောင်လေး အကြောင်းကို အလုံးစုံမသိသော်လည်း ကောင်
လေးနှင့် တွေ့ လျင် သူမ ပို၍ ပျော်ရွှင်မိသည်။ ကျေနပ်မိသည် မဟုတ်ပါလား။
သဲခင်းလမ်းလေးသည် သူတို့ နှစ်ဦး၏စကားသံကို တိတ်တိတ်လေး
နားစွင့်တတ်ခဲ့ပြီ။ လေညင်းလေးများသည် သူတို့ နှစ်ဦး၏ရယ်သံများကြား ကခုန်လျက်။
ကုက္ကိုပင်အိုကြီးသည်ကား သူတို့ နှစ်ဦးကို အကဲခတ်လျက် ပြုံးနေခဲ့သည်။
အလုပ်နားသည့်တစ်ရက်၊ မှတ်မှတ်ရရ စနေ နေ့ ၊ တိမ်တွေ ငိုနေ၏။ ထိုနေ့ က သူမ၏
ခေါင်းပေါ် ထီးနီနီတစ်လက်ကို မိုးထားလျက် ကောင်လေးသည် စကားတစ်ခွန်းကို ခပ်
တိုးတိုးလေးပြောလာ၏။ “ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်” တဲ့ …သံစဉ်သည် တိုးသက်ညက်ညော
ပေမယ့် သူမအတွက် တစ်ကိုယ်လုံးကို ပူရှိန်းရှိန်းဖြစ်သွားစေသည်။ အချက်မကျသည့်
နှလုံးသား၏ စည်းချက်ကြောင့် သူမကို မောဟိုက်စေပြီ။ နှုတ်သည် ဆွံ့ အလျက်
ခေါင်းလေးကို ပိုပြီး ငုံ့ သွားစေခဲ့သည်။ သူမ အရမ်းကို အံ့သြစေခဲ့သည့်နေ့ တစ်နေ့ 
အဲဒီနေ့ က …..
သဲခင်းလမ်းလေးသည် တိမ်တွေ၏ မျက်ရည်တွေထဲ နှစ်မြုပ်နေ၏။ လေညင်းလေး
သည် အလိုက်သိစွာ ငြိမ်သက်လျက်။ ကုက္ကိုပင်အိုကြီးမှာကား…….
မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ နှလုံးသားသည် လှပသည့်သံဇဉ်များနှင့် ရင်ခုန်ကြည်နူး
စေသည့် အသက်ရှိတေးတစ်ပုဒ်ကို ထပ်ခါထပ်ကြားရခြင်းဖြင့် သီဆိုသူကို စွဲလမ်း
တတ်စေသည်လား…..ဘာကြောင့်ကောင်လေးသည် သူမ၏ခင်မင်မှုကို အရင်းအနှီး
လုပ်ပြီး သူမ၏ နှလုံးသားကို သိမ်းပိုက်ချင်ရတာလဲ။ ခင်မင်မှုကို ဘာကြောင့် ချစ်တယ်
ဆိုသည့်စကားလုံးနှင့် အဆုံးသတ်ထိန်းကွပ်ချင်ရတာလဲ……ဟူသည့်အတွေးများနဲ့ ပေါ့။
သူမအတွက် ချစ်တယ် ဆိုသည့်စကားလုံးသည် သူမကို တာဝန်တွေ ပိုစေခဲ့ပြီ။
သူတကယ်ပဲ့လား …ဆိုသည့်အတွေးနှင့်ညတိုင်း ကောင်လေးကို သတိရခဲ့ပြီ။
သူမ နေ့ တိုင်းလုပ်ရသည့် အလုပ်တွေထဲ အလှပြင်ခြင်း ဆိုသည့်အလုပ်တစ်ခု
ပိုလာခဲ့ပြီ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်၏ ကျင့်ဝတ်ဆိုသည့် ခေါင်းစည်းတစ်ခုကို
ခေါင်းမှာ ပန်ဆင်ရင်း ကောင်လေးနှင့်တွေ့ တတ်ခဲ့ပြီ။ ကောင်လေးတစ်ယောက်၏
တန်ဖိုးထားချစ်သည်ဟု ပြောခံရသူ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ ဘဝသည်
ပြောင်းလဲတတ်သည်လား သူမကိုယ်တိုင် မသိတော့။
မိုးကုန်သည့် ဆောင်းညတစ်ည၊ ဒီနေ့ က လပြည့်နေ့ မဟုတ်၊ ကြယ်တွေစုံနေ၏။
လောကတစ်ခုလုံး ငြိမ်သက်လျက်.. ညချမ်းအေးအေးမှာပေါ့….
သူမသည် ညီမ ကျူရှင်အပြန်ကိုစောင့်ရင်း
အိမ်ရှေ့ခုံတန်းလေးပေါ်ထိုင်ပြီး ကောင်လေးအကြောင်း တွေးနေမိသည်။
မနက်ဖြန်ကျရင် ကောင်လေးကို အဖြေပေးမည်။။။။သူမတွေးပြီးပျော်နေ၏။။။
ရုတ်တရက်လေအဝှေ့ ....အရက်နှံ့ တစ်ခု သူမနှခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာသည်။
သူမ ဆက်ကနဲ ခြံတံခါးဝကို ကြည့်လိုက်၏်။ ပုံရိပ်တစ်ခု သူမကိုလက်ရပ်
ခေါ်နေသည်။ ညီမ ကျူရှုင်က ပြန်လာသည်ဟုထင်၏်။ သို့ သော်မဟုတ်…
သူမ အံ့သြသွားမိ၏။ ခြံတံခါးအနား မရဲတရဲလေးကပ်ပြီး ကောင်လေးကို
မေး၏။ပြီး နှင်၏။ သို့ သော်…ကောင်လေးမသွား…ဗလုံးဗထွေးအသံနှင့်
ခြံထဲဝင်ချင်သည်ဟုပြောလာသည်။ ကောင်လေး အရက်တွေ အတော်မူးနေ
သည်လား သူမမသိ…သူ ခြံတံခါးကိုတွန်းဖွင့်နေပြီ။ သူမ ကြောက်ရွှံ့စွာနဲ့ 
ကောင်လေး ကိုမဝင်ဖို့ ပြော၏။ ထွက်သွားဖို့ နှင်၏။ သူတို့ နှစ်ဦးသည်
ခြံတခါးတစ်ခုကို အလည်၌ထားပြီး လိုချင်သည့်ဆန္ဒတစ်ခုစီကို ထုတ်ဖော်ပြော
ဆိုနေကြသည့်အချိန်……ညီမသည် ကျူရှင်ကနေ ပြန်လာခဲ့ပြီ။ ပြီးတော့…
ကြောက်သည့်မျက်လုံးတွေနှင့်စိုက်ကြည့်၏။ ထို့ နောက်အော်ငိုလေပြီ။
မိန်းကလေး တစ်ယောက်၏ အရှက်သည်ဒေါသနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး ငြိမ်သက်
နေသည့် လောကကို ပေါက်ကွဲစေတတ်၏်။ သူမ၏ အတွေးများနှင့် လှပနေသည့်
ညချမ်းလေးသည် ပတ်ဝန်းကျင်၏ အကြည့်များကြား ကျကွဲခဲ့ပြီ။
မိုးဖွဲလေးတွေ ကျနေ၏။ သဲခင်းထားသည့်လမ်းကလေးသည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်
ရွေ့ လျားနေ၏်။ အေးချမ်းမှုတို့ သယ်ဆောင်လာသည့်လေညင်းလေးတစ်အုပ်
လစ်ကနဲ သူမကို ဖြစ်ကျော်တက်သွားသည်။ လမ်းနဘေးထိုင်နေသည့် ကုက္ကိုပင်အိုကြီး
သည် ဘာကြောင့်လဲမသိ ခေါင်းယမ်းလိုက်လေသတည်း။....
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မင်းရဲရှင် at 12:52 PM0comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 8:24 PM0comments
ပိုင်ဆိုင်ထားသော သဘာဝ အလှတစ်ခုပါလားကွယ်....
အရောင်အသွေး စုံလင်လှသည့် ပန်းပွင့်လေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသော
မိခင်သူနာပြုကျောင်းတော်ကြီးသည် အေးချမ်းသည့်ဆောင်းမနက်ခင်းရင်ခွင်ထဲ၌ မြူနှင်း
တွေကို ခြုံရင်း အတိတ်ထဲက ပန်းကလေး နှစ်ပွင့် အကြောင်းကို တွေးနေမိသည်။
ပန်းပွင့်လေးတွေအတွက် သူနာပြုကျောင်းတော်ကြီးသည် မိခင်ဖြစ်၏။ ပြုစုပျိုးထောင်
ပေးသော ဥယျာဉ်မူးဖြစ်၏။ ပူလောင်မှု့ မရှိသော နွေရာသီမနက်ခင်းတစ်ခု၌ ပန်းလေးနှစ်ပွင့်
သည် ကျောင်းတော်ကြီးဆီသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့၏။
မျက်နှာပေါ် လှပသောအရောင်တွေခြယ်သထားသည့် ရမ္မက်ပြင်းပြင်းပန်းတစ်ပွင့်....နှင့်
မျက်နှာပေါ် သဘာဝအရောင်လိမ်းခြယ်ထားသော တောရိုင်းပန်းတစ်ပွင့်။ ဤပန်းနှစ်ပွင့်သညသိပ်ချစ်ကြသည့် သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်။
သူတို့ နှစ်ဦး၏ သဘာဝသည် ဆန့် ကျင်နေ၏။ သို့ သော် အတူတူနေ၏။ ပွင့်လင်းကြ၏။
လိုက်ဖက်လှ၏။ သိပ်ချစ်ကြသည့် အရိုင်းနှင့်အယဉ်ပေါင်းစဉ်းနေသော အလှပိုင်ရှင်နှစ်ဦးပင်
တည်း။ သူတို့ နှစ်ဦးသည် စာအတူတူကျက်၏။ ထမင်းအတူတူ စား၏။ တစ်ခန်းတည်းအတူတူ
အိပ်၏။ သူနာပြုကျောင်းတော်ကြီး၏ ရင်ခွင်အတွင်း သူတို့ နှစ်ဦး၏သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်သည်
အခိုင်မာဆုံးဟု ကဗျည်း ထိုးထားခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။.......
အပူငွေ့ မပြယ်သေးသည့် ညနေခင်းတစ်ခုမှာ "မင်္ဂလာပါ...ကျွန်တော်ကျောင်းသား
အသစ်တစ်ဦးပါ " ဆိုသည့်လေပြေလေးနှင့် ကောင်လေး တစ်ယောက်သည် ပန်းလေး နှစ်ပွင့်
အကြားသို့ တိုးဝင်လာခဲ့လေသည်။ ပန်းလေး နှစ်ပွင့် ကလည်း ကြည်ဖြူစွာ ကျောင်းသားအသစ်
ကောင်လေး ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ် လက်ခံခဲ့သည်။ သူတို့ သုံးဦးသည် သူငယ်ချင်းအဖြစ်အရမ်း
ခင်မင်မှု့ ဟူသော ကြိုးတစ်ချောင်းစီဖြင့် ကျစ်ထားသော သံယောဇဉ်ကြိုးသည်
သူတို့ သုံးဦးကို ရစ်ပတ်ချည်နှောင်၍ အချိန်ရထားကြီးပေါ်တင်ဆောင်ရင်း နေ့ တွေ၊ ရက်တွေ၊
လတွေ၊ နှစ်တွေကို အတူတူ ဖြစ်ကျော်ခဲ့ကြလေသည်။ ဒီလိုနဲ့ ပန်းလေးနှစ်ပွင့်သည် စိတ်ထား
ဖြူစင်သည့်ကောင်လေးအပေါ် အားကိုးလာခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ကြသည်။
ပန်းလေးနှစ်ပွင့်......သင်းကြိုင်သည့် ရနံ့ တွေနှင့်အတူ အလှတွေ ဖူးပွင့်လာခဲ့ပြီ။
နွေးထွေးသည့်ကောင်လေး၏ နှလုံးသား တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ချင်လာသည်။ ဘာကြောင့်လဲ
ပန်းလေးနှစ်ပွင့်...သူငယ်ချင်းဆိုသည့်အဖြူရောင်စည်းကိုကျော်ပြီး စိတ်ထားဖြူစင်သည့်
ကောင်လေး ကိုချစ်ခဲ့မိပြီမဟုတ်ပါလား။.......သို့ သော်.....ပန်းလေးနှစ်ပွင့်သည်
ကောင်လေး ကိုချစ်မိနေကြောင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မဖွင့် ပြောကြချေ။.....
ချစ်မိနေကြောင်း မဖော်ပြဘဲ အချစ်စိတ်နှင့် ပူလောင်နေသည့်နှလုံးသားကို တတ်နိုင်သမျှ
ဖုန်းကွယ်ထားသည်။ အရိုင်းပန်းလေး မှာကား သည်လိုမဟုတ်။ ကောင်လေး ကိုချစ်မိသည့်
အကြောင်းနှုတ်က ဖွင့်မပြောပေမဲ့ သူမ၏လုပ်ဆောင်မှု အားလုံးသည် ကောင်လေး အပေါ်
ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်းကို ပြောပြနေသလို ပေါ်လွင်နေခဲ့လေသည်။...
ဒီလိုနဲ့ ပေါ့......သူတို့ သုံးဦး၏ အဖြူရောင်သံယောဇဉ်ကြိုးသည် အရောင်တွေ စွန်း
လာခဲ့သည်။ ပန်းလေးနှစ်ပွင့် ၏ ဖြူစင်သည့် နှလုံးသားတွေ ပူလောင်လာခဲ့ပြီ။ အရင်က လန်း
ဆန်းပွင့်လင်းသည့် အပြုံးများသည်လည်း ညိုးနွမ်းလာခဲ့ပြီ။ တစ်ဦး ကိုတစ်ဦး သံသယတွေနှင့်
ကြည့်တတ်လာပြီ။ ချိုသာသည့်စကားလုံးများတွင် မာနတွေထည့်သွင်းအသုံးပြုတတ်လာပြီ။
ပန်းလေးနှစ်ပွင့်သည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နှုတ်ကထုတ်မပြောကြဘဲ မနာလိုမှု့ တွေနဲ့ အတူ ကျိတ်
ပြိုင်ဆိုင်ရင်း အရင်ကခိုင်မာခဲ့သည့် သံယောဇဉ်ကြိုးသည် အက်ကွဲလာခဲ့ပြီလေ။
အရိုင်းပန်းလေး သူမ သိပ်ချစ်၏။ ဘဝမှာ ပထမဦးဆုံးချစ်မိသည့် ချစ်သူအပေါ်
အစစအရာရာအနွံတာခံခဲ့၏။ အရင်က အချစ်ဆိုတာဘာလဲ...သူမလုံးဝမသိ။ ယခုတော့
နှစ်နှစ်ကာကာ စွဲလန်းမိပြီ။ အချစ်ကို ကိုးကွယ်မိခဲ့ပြီ။ အချစ်ကို ကိုးကွယ်မိတော့ အချစ်ရဲ့
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာတတ်ခဲ့ပြီ။ ချစ်ရတဲ့သူ မျက်နှာနည်းနည်းလေးမှမငြိုးစေချင်။
ချစ်သူ ပြုံးပျော်နေတာကိုပဲ့မြင်ချင်သူ။ ချစ်ရတဲ့ သူအတွက်ဆို သူမတစ်ဘဝလုံးပေးအပ်နိုင်သူ။
သူမ.....အချစ်စိတ်တွေနှင့် လောင်ကျွှမ်းပူလောင်နေသော နှလုံးသားဟာ ချစ်ရတဲ့သူဆီက
နွေးထွေးသည့်လေပြေလေးတစ်ခွန်းဖြင့် ငြိမ်းသတ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ယုံကြည်ထားသူ.....
ရမ္မက်ပြင်းပြင်းပန်းလေး....သူမ သိပ်ချစ်၏။ ဘဝမှာ ပထမဦးဆုံးချစ်မိသည့်
ချစ်သူအပေါ် ဘာမဆိုလုပ်ပေးချင်၏။ သို့ သော် ချစ်ရသူအပေါ် သူမ ချစ်တဲ့ အကြောင်းလစ်ဟ
ပြလိုက်လျင် သူမ၏ အချစ်ကို အထင်သေးသွားမှာကြောက်၏။ ပြီးတော့ သူမက စပြီး ချစ်သည့်
အကြောင်းလစ်ဟ ပြရမည်ကို ဝန်လေး၏။ ကိုယ့်ဖက်က မဖော်ပြပဲ သူ့ ဖက်က ချစ်တဲ့ အကြောင်း
ပြောလာမည့်နေ့ ကို လိုချင်၏။ သူ့ ကိုတော့ချစ်မိပြီ။ သို့ သော် ချစ်မိနေသည့်အကြောင်းကို လုံးဝ
အချစ်မီးလောင်ကျွှမ်းနေသော နှလုံးသားကိုယ်စီနှင့် ပန်းလေးနှစ်ပွင့်သည် မာနတွေ၊
သံသယတွေ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနှင့်အတူ စစ်အေး တိုက်ပွဲဖြစ်နေခဲ့လေသည်။ သူတို့ နှစ်ဦး၏
ဆက်ဆံရေးသည် အေးစက်လာ၏။ ခြောက်သွေ့ လာ၏။ သို့ သော် အရင်ကလို အတူတူစား၏။
အတူတူစာကျက်၏။ တစ်ခန်းတည်းအတူတူအိပ်၏။ သို့ သော် ပွင့်လင်းမှုမရှိတော့ချေ။
အရိုင်းပန်းလေး ဆီသို့ကောင်လေးက စကားတစ်ခွန်းလက်ဆောင် ပေးခဲ့သည်။
" မနက်အစောကြီး နင့်တစ်ယောက်တည်း တို့ ထိုင်နေကြ ဗန်ဒါပင် အောက်မှာစောင့်နေ...
ငါနင့် ကိုစကားတစ်ခွန်းပြောချင်လို့ " တဲ့...အရိုင်းပန်းလေး..ဘယ်လောက်ပျော်လိုက်မလဲ...
သူမ အရမ်းပျော်ခဲ့သည်။ ချစ်ရတဲ့ သူဆီက စကားတစ်ခွန်းဟာ သူမမျှော်လင့်နေသည့်
အလှပဆုံး အိပ်မက်ကမ္ဘာတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိစေမည့် လမ်းစတစ်ခုမဟုတ်ပါလား။
အရိုင်းပန်းလေး စိတ်ကူး ကမ္ဘာထဲ လျောက်လည်ရင်း တစ်ညလုံး အိပ်မပျော်ခဲ့ဘူး။
ချစ်မိသူအတွက် ချစ်ရတဲ့ သူဆီက မျှော်လင့်မှု စကားတစ်ခွန်းဟာ အရာရာခွန်အား
အလွမ်းတွေဝေနေသည့်မနက်ခင်းလေးမှာ ခြေသံလေးတစ်ခု ညင်ညင်သာသာလေး
တိုးထွက်လာသည်။ တမ်းတစိတ်နှင့် ဖြတ်ကနဲ လှည့်ကြည့်လိုက်၏်။ သြော်.............
လွမ်းမိုးနိုင်သူ ပုံရိပ်လေး မဟုတ်ပါလား...." ဟေ့...သူငယ်ချင်း ...စောလှချည်လား...
နင်ရောက်နေတာကြာပြီလား" တဲ့ ချိုမြကြည်လင်စွာ သူမနားထဲတိုးဝင်လာသည့်လေပြေလေး
ဟာ သူမရင်ထဲ ခါတိုင်းနေ့ တွေထက် ပိုပြီးလှပသာယာနေသလို၊ ဒါမှမဟုတ် ချားရဟတ်
အမြင့်ကြီးစီးရသလို၊ အသဲထဲအေးကနဲ နွေးကနဲဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်လေ။
ဆုပ်ကိုင်လိုက်၏။ အရိုင်းပန်းလေး မရုံးမိဘူး။ ခေါင်းလေ ငုံ့ နေသည်။ သူမ ရင်ထဲ
အတွေးတွေ ယောက်ယက်ခတ်နေ၏။ ကောင်လေး ကတိုးတိုးလေးပြော၏။
"နင့်ကို စကားတစ်ခွန်းပြောစရာရှိတယ်" တဲ့ အရိုင်းပန်းလေး ခေါင်းမမော့ရဲဘူးလေ။
ဒါပေမဲ့ သူမမျက်နှာလေးပေါ်မှာ နှင်းဆီအနီရောင်ပန်းတွေ အဖူးလိုက်အဖူးလိုက် .....
" ငါသူ့ ကို ချစ်မိနေပြီ " တဲ့သူမ ကိုယ်လုံးလေး တုန်သွားသည်။ သေချာဖို့ ခေါင်းလေးကို
မော့လိုက်ပြီး လေသံ တိုးတိုးလေးနှင့် ဘယ်သူ့ ကိုလဲလို့ ထပ်မေးလိုက်သည်။
" ငါ....ရမ္မက်ပြင်းပြင်းပန်းလေးကို အရမ်းချစ်မိနေပြီ"တဲ့ " နင် သူ့ ကိုပြောပေးပါလား" တဲ့
ကောင်လေးဆုပ်ကိုင်ထားသည့်သူမ၏လက်ကိုဆက်ကနဲရုံးလိုက်၏။ ကောင်လေး ကဆက်
ပြောသည်။ ဒါပေမဲ့ သူမ ဘာမှ မကြားတော့ဘူး။ ထိုင်နေရင်း ငြိမ်သက်သွားပြီ။ သူမ၏ နှလုံး
သားဟာ ပူလောင်မှုကြောင့်၊ နာကျင်မှုကြောင့် မျက်ဝန်းတွေထဲ နှင်းမိုးတွေရွာကုန်ပြီ။ သူမ
မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ စိတ်ကူးတွေ ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့..............
ကောင်လေး....ငါနင့်ကို သိပ်ချစ်တယ်ဆိုတာ ငါနှုတ်က ဖွင့်ပြောစရာမလိုတော့
လောက်အောင် ငါ့ရဲ့အချစ်တွေကို နင်မြင်အောင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီ။ နင်မသိတာလား....
ဒါမှမဟုတ် မသိချင်ရောင်ဆောင်ခဲ့တာလား။ နင်ဟာ ငါ့ရဲ့အချစ်ဦးပါ...ငါလေ နင့်ကို
သိပ်ချစ်မိနေပြီလို့ ပြောချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့
ကျင့်ဝတ်အောက်မှာ နစ်မြုပ်မိခဲ့သည့်အတွက် နောင်တရမိတယ်....ငါ...နင့်ကိုမျှော်
လင့်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်နင် ငါ့ကို............
အရိုင်းပန်းလေး စိတ်ထဲကနေ ငိုနေသည့်နှလုံးသားတစ်ခုနှင့် ရင်ဖွင့်နေခဲ့ပေမယ့်
ကောင်လေးရဲ့စကားလုံးတွေဟာ သူမကိုပိုပြီးနာကျင်လာစေတယ်။ နာကျင်မှုကတဆင့်
အသက်ရူလို့ မဝတော့ဘူး။ ရှိုက်သံလေး တစ်ချက်ပေးရင်း......
.."ငါသွားတော့မယ် " ..
ဆိုသည့်စကားတစ်ခွန်းနဲ့ ကောင်လေးရဲ့ရှေ့ကနေ ရုန်းထွက်ခဲ့ရတယ်လေ။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ရမ္မက်ပြင်းပြင်းပန်းလေးနှင့်ကောင်လေးတို့ ချစ်သူတွေ
ဖြစ်သွားခဲ့ကြသည်။ အရိုင်းပန်းလေးတစ်ပွင့် အချစ်ကို ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်ခဲ့သည်။
မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး အချစ်ရဲ့အောက်မှာကျဆုံးခဲ့ရသည်။ သူတို့ နှစ်ဦးပျော်နေချိန်
တွင် အရိုင်းပန်းလေးတစ်ပွင့် ငိုနေခဲ့သည်။ တိတ်တိတ်လေး တမ်းတစွာ ခိုးကြည့်သည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အချစ်ဦးဆိုသည့် စကားလုံးကို သူမနှလုံးသားမှာ မြတ်မြတ်နိုးနိုး
အဲဒီနောက်ပိုင်း အရိုင်းနှင့်အယဉ် ပန်းလေးနှစ်ပွင့်ဟာ ဆက်ဆံရေးတွေကျဲသွား
ခဲ့သည်။ စကားတွေလည်းသိပ်မပြောကြတော့ဘူး။ ထမင်းလည်းအတူတူမစားတော့ဘူး။
အရိုင်းပန်းလေး ကတစ်ခြားအခန်းသို့ ပြောင်းသွားခဲ့သည်။ ဒီလိုနဲ့ ပန်းလေးနှစ်ပွင့်၏ နှလုံး
သားနှစ်ခုသည် သံသယတွေ အမုန်းတွေ ပေါက်ဖွားလာခဲ့ကြပြီး သူတို့ နှစ်ဦး မျက်နှာ
စွမ်းအားပျင်းလှ၏။ နုနယ်သည့်ပန်းလေးတွေ၏ နှလုံးသားတွေဟာ အချစ်ဆိုသည့်မီး
လောင်ကျွှမ်းမိရင် သူငယ်ချင်းဆိုသည့် ခိုင်မာသည့်အဖြူရောင်သံယောဇဉ်ကြိုးလည်း
ပန်းလေးတွေရဲ့သဘာဝ ကိုလေ့လာရင်း အနာဂတ်မှာ ပန်းလေးတွေသင်းကြိုင်
သည့်ရနံ့ တွေနှင့်အတူ အစွမ်းကုန်ပွင့်လန်းဖို့အသိဆိုသည့်ရနံ့ တွေထည့်ပေးဖို့ ။။။။
ပန်းလေးတွေရဲ့ နှလုံးသား ညိုးနွမ်းမှု မရှိရလေအောင် အချစ်ဆိုသည့်သင်ခန်စာလည်း
ဘာသာတစ်ခုအနေဖြင့် သင်ပြပေးရဦးမှာပါလားလို့တွေးမိရင်း မိခင်သူနာပြုကျောင်း
ကြီးသည် တာဝန်တစ်ခု ပိုလာခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလား၊................
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မင်းရဲရှင် at 12:04 AM 1 comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:55 PM 1 comments
သမိုင်းထဲကွယ်ပျောက်ခဲ့သည့် ညီနောင် နှစ်ဦးအကြောင်း ပြောပြပါရစေ...
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်ဘယ်သွားသွား ဖဝါးနဲ့ ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါခဲ့သည်။
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်အတွက်အရိပ်ပမာ ကိုယ်ရံတော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်နှင့် အတူ ဥတုရာသီ ဘယ်လောက်ကြမ်းကြမ်း မငြီးမညူ
ဖြစ်ကျော်ခဲ့ဖူးသည်။-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်အတွက် အားကိုးရာ အဖော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်နှင့် အတူ သမိုင်းတွင်သည့်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွဲခဲ့ဖူးသည်။
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်အတွက် အသက်စွန့် ပြီးလုံခြုံမှုပေးခဲ့ဖူးသည်။
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်နှင့်အတူ လောကဓံရဲ့လှည့်ကွက်ထဲ အကြိမ်ကြိမ်သက်
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်အတွက် အကြိမ်ကြိမ်လမ်းပြပေးသူဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်နှင့်အတူ လောက ရဲ့ထိုးနှက်မှု့ ကို ခါးစီးခံခဲ့ဖူးသည်။
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်အတွက် ကြိတ်ပြီး မျက်ရည်ကျခဲ့ဖူးသည်။
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်နှင့်အတူ လှပသည့်နန်းတော်ထဲ လျှောက်လည်ခဲ့ဖူးသည်။
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်နှင့်အတူ ခမ်းနားသည့် ညစာ စားပွဲတက်ရောက်ဖူးသည်။
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်နှင့်အတူ ကမ္ဘာအနှံ့ ခြေဆန့် ခဲ့ဖူးသည်။
-သူတို့ ညီနောင်သည် သခင်ပျော်ရင်ကျေနပ်၏။ သခင်ဝမ်းနည်းလျင်မျက်ရည်စို့ ၏။
သခင်ဒေါသ ထွက်လျင်ဖြေလျော့ပေးချင်၏။ သခင် စိတ်ဓါတ်ကျလျင် အားပေးစကား
လောကသည် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီလား.......ယခု သူတို့ ၏သခင်သည် သူတို့ ညီနောင်အား
လှပသည့်နန်းတော်ထဲ လည်ပတ်ဖို့ မခေါ်တော့....ခမ်းနားသည့် ညစာ စားပွဲတက်ရောက်
ဖို့ မခေါ်တော့....ပြီ....သခင်သည် သူတို့ ညီနောင်ကို လျစ်လျူရှုထားခဲ့ပြီလား....
သခင်သည် ညီနောင် နှစ်ဦးကို မှောင်မှဲတိတ်ဆိတ်သည့်အခန်းငယ်လေး တစ်ခုအတွင်း
နဲ့ သူတို့ ညီနောင်သည် အရွယ်အိုမင်းခဲ့ပြီ။ အရင်က သန်စွမ်းကြံ့ခိုင်သည့်ခန္ဒာလည်း
ပွန်းပဲ့ ချည့်နှဲ့ ခဲ့ပြီ..သခင်သည်ကား သူရည်မှန်းခဲ့သည့်နေရာတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီမဟုတ်
" ဤညီနောင်ကား ငါတန်ဖိုးထားသည့် အရာများထဲက အဖိုးတန်ဆုံးတည်း....
သူတို့ ညီနောင်သည် ငါ့ဘဝ၏ အဖော်ကောင်းဖြစ်သလို ငါမရှိသည့်နောက်
ငါ့၏ ကိုယ်စား အတွေ့ အကြုံများကို ပြောပြနေမည့် သမိုင်းဝင်သက်သေတည်း....."
ဟူသည့် သခင်ရဲ့ချီးမြောက်စကားကြားချင်ခဲ့ပေမဲ့ သခင်ထားရာနေ သခင်စေရာသွား
သခင်ရဲ့စကား မြေဝယ်မကျနားထောင်ရင်း ပြောချင်သည့်စကား ပြန်မပြောနိုင်သည့်
...... အဖေ မစီးတော့သည့် ဖိနပ် တစ်ရံအကြောင်း ခံစားမိ၍
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မင်းရဲရှင် at 5:26 AM2comments